प्रचण्डको वडा र कांग्रेसको बलियो ठाउँमा नै रेणुलाई धोका ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रचण्डको वडा र कांग्रेसको बलियो ठाउँमा नै रेणुलाई धोका !
चितवन । चारवटा महानगरपालिका मध्ये सबै भन्दा धेरै नागरिकलाई चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा चासो रहेको छ । चितवनको भरतपुरका कांग्रेस र माओवादी दुइटै अपेक्षा गरेका ठाउँमा नै मेयरका उम्मेदवार रेणु दाहालको पक्षमा कमजोर मत आएको छ । एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवाली भन्दा माओवादी कांग्रेसबाट मेयरकी उम्मेदवार रेणु दाहाल पछि पर्दै गएकी छन् । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार उनी एमालेका देवीप्रसाद ज्ञवाली भन्दा १६७३ मतले पछि परेकी हुन् ।
एमालेका देवी ज्ञवालीले हालसम्म ६३४३ मत ल्याइसकेका छन् । यस्तोमा उनले ४६७० मात्रै मत ल्याएकी छन् । उप मेयरमा एमालेकी दिब्या आचार्यको पछि परेकी छन्। । उनले अहिलेसम्म ५३३९ मत ल्याएकी छन् । काङ्ग्रेसकी पार्वती शाहले ५५२८ मत ल्याएकी छन् ।
वडा नम्बर ४ मा २७०० गणना हुँदा वडाध्यक्षमा पनि एमालेले अग्रता लिएको छ । त्यहाँ एमालेका हरिप्रसाद आचार्यले ९०७ मत ल्याउँदा कांग्रेसका उम्मेदवारले ८४९ मत मात्रै ल्याएका छन् ।
अहिले मतगणना भइरहेको ४ नं वडा मेयरका उम्मेदवार देवी, रेणु र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वडा पनि हो । त्यहीँ एमालेले अग्रता लिएको हो । कांग्रेसको पडक रहेको बजार क्षेत्रमा पनि एमालेले अग्रता लिएको छ ।
4781 पटक पढिएको